I-UK ikhuphe iimvavanyo ezinyanzelekileyo ze-PCR zabahambi abagonyiweyo
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba eziHlumayo zase-UK » I-UK ikhuphe iimvavanyo ezinyanzelekileyo ze-PCR zabahambi abagonyiweyo
Airlines • isikhululo • Iindaba zeManyano • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Safety • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba eziHlumayo zase-UK
Ulawulo lovavanyo lwe-PCR lubonakalise ukuba alunakwenzeka, lubiza kakhulu kwaye lunegalelo elikhulu kulibaziseko olukhulu kwimida. Kukwanamaxesha angenangqondo.
I-UK iphelise iimvavanyo ze-PCR zabahambi abagonywe ngokupheleleyo.
I-ETOA incoma inyathelo lamagosa ase-UK lokuphelisa igunya lovavanyo lwe-PCR,
Ukususwa kwesidingo sokugonywa kabini "kwamkelekile kakhulu".
Njengokuba intelekelelo ijikeleza ngokususwa kovavanyo olunyanzelekileyo lwe-PCR lokufika kwabo bagonyelwe kabini e-UK Tom Jenkins, i-CEO ye-ETOA, wenze la magqabaza alandelayo:
“Inkqubo yovavanyo ye-PCR ibonakalise ukuba ayinakwenzeka, iyabiza kwaye inegalelo elikhulu kulibaziseko olukhulu kwimida. Kukwanamaxesha angenangqondo. Nabani na ophuma e-UK engaphantsi kweeyure ezingama-36 kufuneka athathe uvavanyo lwabo "lokufika kwangaphambili" e-UK, ukuze baqinisekise ukuba bakhuselekile ukubuyela e-UK. Ke ukususwa kwabo bagonyelwe kabini kwamkelekile.
UTom Jenkins, u-CEO we-ETOA
“Kodwa kubalulekile ukuba oku kuzolulela kwandiswe kuzo zonke iindwendwe ezigonywe kabini, hayi iBrits kuphela. Inkqubo ye- UK iye yazahlula yodwa kubatyeleli abangenayo yaza yatyibilika emva kwazo zonke ezinye iindawo eYurophu ngenxa yoko. Ngelixa i- $ 30 yezigidigidi zeshishini lezokhenketho elingene phantse kuyo yonke le minyaka mibini idlulileyo, kufuneka silungise umfanekiselo wethu njengendawo eyamkelekileyo nethe tye yokutyelela. Okukhona kulibaziseka, kokukhona uya usiba mkhulu umonakalo kuqoqosho lwase-UK. ”
Okwangoku, ukuze ungene e-UK, umhambi kufuneka abe nobungqina bovavanyo olubi lwe-COVID-19 kwisikhululo sakho seenqwelomoya, sithathwe kwiintsuku ezi-3 zokubalekela kwakho eNgilane. Uvavanyo kufuneka luhlangabezane nemigaqo kunye nemigangatho echazwe nguRhulumente wase-UK.
I-ETOA (umbutho wezokhenketho waseYurophu) Umbutho wezorhwebo wabasebenza kubakhenkethi kunye nabanikezeli kwiindawo zaseYurophu, ukusuka kwiimveliso zehlabathi ukuya kumashishini azimeleyo asekhaya.